~~MOOSINNI NI DABRA!~~ - Welcome to bilisummaa
~~MOOSINNI NI DABRA!~~
bilisummaa August 9, 2014	Leave a comment
Abdii hin kutatin teessee hin hifatin
Hiraarteen cinqatin ustee hin rakkatin
Ifiin if eergartee Nama hin komatin!
Osoo human qabduu odoo yeroon jirtuu
Kan ariitee qabdu osoo fiiydee baatuu
Moosinni ni dabraa Umriin hin dhaabbattuu
Yeroon takka deemnaan namaaf hin deebituu
Sirumaa hallettuu Keessatti waan waartuu
Si harkaa baanaan lammadan-dhalattuu
Tana yoon saammatin eenyu kan komattuu?
Danta-dhabaan hifattee Calliftee dhiiftee
Qaama qucaacsitee Sammuu adoolsitee
Harka marattee Miila ulfeeysitee
Garaa addeeysitee Mataan yoo maratte,
Eenyu kan komattu gaafa yeroon kutte?
Jahan fayyaa si harka jirtii
Ka’ii tattaafadhu malli kan abbaatii
Kan sirra siif yaadu hin jiru namuutii
Dammaqii sossoo’i hin taphatin fitti.
Gaafa yeroon kuttee waa hundi raawwatte
Hoggaa waa martinuu bakka qaqqabatte
Yeroo dubbiin hundi sitti gara galte;
Gaafa san atis kunoo sheenaa duutee
Silaan akkas ta’een quba if ciniinte.
Kan hiraanni shuummoo yeroon irra kaayyataa
Okkotee beelaa abbat jala shidataa
Yooniif tattaafatte tan yaadde argattaa
If dagattee muuynaan hirriibni siin kuta.
Gaafa gadaa ifii yeroo saammatanii
Jiruu fi jireenyi yoo tattaafatanii
Kana tahuu baannaan humaatuun taranii
Ifii Daddabanii Rabbin sakkabanii
Dunquqquu jalatti ciisteen muusahinii
Hirriibarraa ka’i abjuun sin sobinii!
Xiinxalii hubadhuu ifiin if gaafadhuu
Bal’isii yaadii sirritti qoradhuu
Dhugaa fitti himii hifannoo lagadhuu
Dhaamsa kanas hujirra oolfadhu!
Yaabo mee dhagayi hin didin namanaa
Himan-diddeen booddeen isii sheenaa
Gowwoomanii hafuun abbumaaf salphinaa
Kunoo sitti gabaa gorsi kiyya kanaa.
Previous Text of address by Muhammad Al-Daif, General Commander of the Izz Ad-Din Al-Qassam Brigades
Next Bulchiinsii Amerikaa Ganna 15tti Itoophiyaa Waliin Biyya Afrikaa Jaha Elektirikiin Walin Gahuuf Hujiitti Jira